/Blog/Gallery/Ny zavatra rehetra momba ny Oxandrolone (Anavar), mila fantatrao
Posted on 10 / 26 / 2019 by 阿斯劳 nanoratra tao Gallery.
Inona no atao hoe Oxandrolone (Anavar)?
Oxandrolone (53-39-4), miaraka amin'ny vovobony Anavar ho marika marika, dia fanafody androgen sy ny anabolic steroid (AAS), izay malaza noho ny tanjany sy ny angovo mampivoatra ny angovo. Izy io dia eo amin'ny steroola anabolic malaza indrindra sy ampiasaina. Ny anabolika dia midika fa mitombo ny proteinina sela, ka izany dia mitondra fitomboana hozatra haingana sy taolana matanjaka.
Amin'ny maha analogue testosterone (ny endriny dia mitovy amin'ny an'ny testosterone), i Anavar dia mampihetsika ireo mpandray nokleary manokana ary mamatotra azy ireo tahaka ny fanaon'ny testosterone. Noho izany dia mety ho ilaina amin'ny fitsaboana soloina testosterone.
Oxandrolone (Anavar) vovoka (53-39-4) dia azo antoka hampiasana na lahy na vavy rehefa manaraka ny fatra mety. Aleo ihany, maivana ny vokany mety ho mazàna. Araka izany, io dia iray amin'ireo vahaolana vahaolana ho an'ireo olona tratry ny soritr'aretin'ny VIH na hypogonadism lahy satria manatsara ny fihazonana azota ary koa ny hozatra tsy misy tavy.
Raha mitady steroid anabolika malefaka na haingana nefa haingana ianao, dia tsy azo inoana fa tsy mety ny Oxandrolone powder (53-39-4). Ny olona sasany, na dia ao amin'ny Anavar reddit reviews aza dia miantso azy io hoe "The Girl Steroid" satria anisan'ireo sela vitsivitsy izay mandeha tsara miaraka amin'ny ankamaroan'ny vehivavy.
AASraw no mpanamboatra matihanina anavar vovoka (oxandrolone).
Ny tantaran'ny Oxandrolone
Oxandrolone (Anavar) sambany tamin'ny taona 1964 no nofaritana tao amin'ny Searle Laboratories (sampana iray an'ny Pfizer ankehitriny). Ny orinasa dia mpanamboatra fanafody malaza hafa toa an'i Celebrex, NutraSweet ary Ambien. Famoronana ny ezaka iarahan'i Raphael Pappo sy Christopher J. Jung izany.
Nahaliana ny manam-pahaizana momba ny fikarohana ny vokadratika androgenika malemy indrindra avy amin'ny Oxandrolone mifandraika amin'ny vokatry anabolika ny zava-mahadomelina. Avy eo izy ireo, tamin'ny 1964, dia nanolotra ny zava-mahadomelina a fanafody fanafody ho an'ny fampiroboroboana ny fihenan'ny hozatra amin'ny olona manana fatiantoka mavesatra ary koa ny fitsaboana amin'ny SIDA.
Mampalahelo fa noteren'ireo mpanao bodybuilders ny zava-mahadomelina, ary io fampahalalana ratsy io no nahatonga izany. Vokatr'izay dia nanajanona tao 1989 ny Searle Laboratories.
Taorian'ny taona maro, ny Bio-Technology General Corporation (Bio-Technology General Corporation) dia nandray ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny zava-mahadomelina. Ny fitsapana momba ny fitsaboana arak'asa nataon'ny orinasa tamin'ny fanafody tao 1995 dia nitarika ny famoahana azy faharoa, fa avy eo ambanin'ny Oxandrin (marika anarana).
Nandritra izany fotoana izany, ny fanafody ny anabolic steroid dia amidy eo ambanin'ny marika maro isan-karazany, ao anatin'izany ny Genesis Oxandrolone ary Oxandrin, manerantany. Na izany aza, natambatra ho marika marika amerikana ankehitriny, Anavar izy io.
Rehefa nandeha ny fotoana, nankatoavin'ny Food and Drugs Administration (FDA) ny Oxandrolone ho an'ny toetran'ny zava-mahadomelina kamboty ho fitsaboana ny Turner Syndrome, ny fihenan'ny lanja entin'ny VIH ary koa ny fihenan'ny lanjan'ny VIH.
Ny fampiasana Oxandrolone na eo an-tsena sy ambanin'ny tany
Tena lafo ny Oxandrolone hamokatra ary misy fitsipika hentitra momba ny fanamboarana sy famarotana ary fanjifana. Mba hivezivezy ireo sakana sy hanangom-bola, dia maro ireo mpivarotra izay naka ny orinasa tamin'ny famokarana sy nivarotra tany ambanin'ny tany.
Mampalahelo fa ny tsenan'ny mainty 'Oxandrolone' dia amboarina any amin'ny laboratoara fanamoriana tsy manara-penitra izay zara raha arahina ny fenitra takiana. Vokatr'izany, sarotra be amin'ny mpampiasa ny mahita legit Anavar avy amin'ny tsena mainty na ny laboratoara ambanin'ny tany. Ankoatra ny tsy manome valiny tadiavina, ny fanafody toy izany dia mety hiteraka voka-dratsy ratsy.
Olana iray hafa amidy amin'ny Anavar amidy eny an-tsena ambanin'ny tany dia ny hoe afaka manararaotra na dia zaza tsy ampy taona aza satria tsy misy fitsipika manery ny fahazoany sy ny fampiasana azy.
Raha te hahazo ianao Anavar azo antoka sy azo antoka, dia alao antoka fa manao ny anao ianao Ny vovony Oxandrolone mividy tamina mpivarotra manana fahazoan-dàlana sy ara-dalàna. Na dia fividianana iray avy amin'ny mpivarotra toy izany aza i Oxandrolone dia azo inoana kokoa raha oharina amin'ireo any amin'ny tsena mainty.
Matoky ianao fa mahazo ny tena vovony na vokatra farany ianao satria ny ankamaroan'ny mpivarotra toy izany dia tsy atahorana ho very ny fahazoan-dàlana vokatry ny fivarotana vokatra tsy mitombina. AASraw dia isan'ny mpivarotra lafo indrindra Oxandrolone.
Ny vidin'ny oxandrolone mazàna dia avo. Noho izany, raha sendra mpivarotra mivarotra ny zava-mahadomelina amin'ny vidiny 'fihenam-bidy lalina' ianao, dia tadiavo raha manana fahazoan-dàlana ny mpivarotra ary miasa ara-dalàna mba hahazoana antoka fa tsy hiafara amin'ny vokatra mpanohitra.
Anavar / Oxandrolone dia entana lafo vidy hanamboarana azy, ary matetika no tsy tsara torohevitra ny hividy izany amin'ny mpivarotra manolotra azy amin'ny vidiny 'fihenam-bidy lalina'. Azonao atao ny manamarina Hevitra Anavar hahitana raha miasa amina rafitry ny fomba ara-dalàna ny mpivarotra ary raha ny vokatra ny maha-izy ny tena marina. Ny famerenana anavar dia afaka manome anao hevitra ihany koa momba ny toerana tsara indrindra hividianana ny fanafody.
Ny fepetra lalàna Oxandrolone any Etazonia sy ny firenena hafa
Any Etazonia, ny lalàna mifehy ny fanaraha-maso dia manasokajy ny Oxandrolone / Anavar, amin'ireo androgen sy steroid anabolika maro hafa ho toy ny singa voafehy ao amin'ny Jadual III. Midika izany fa ny olona iray dia tsy maintsy mahazo azy amin'ny alàlan'ny dokotera sy fivarotam-panafody manana fahazoan-dàlana.
Ny sazy ara-dalàna dia nomen'ny olona tsy ara-dalàna ny zava-mahadomelina amin'ny fandaharam-potoana III, ao koa Anabolic steroids an'ny Oxandrolone na farany Anavar, dia miankina amin'ny lalàna mifandraika manokana mifehy fanjakana iray.
Amin'ny ankapobeny, ny mpanao meloka dia apetraka ao ambadiky ny bara ary mandoa. Araka ny lalàna mifehy ny fibaikoana, ny sasany amin'ireo heloka bevava mifandraika amin'i Oxandrolone dia misy ny fividianana hosoka sy ny fananana zava-mahadomelina raha tsy misy fanafody mivaingana.
Any UK, ny Oxandrolone dia iray amin'ireo zavatra voafehy voasokajy ao amin'ny Fandaharam-potoana IV; ny steroid anabolika rehetra dia an'ity sokajy ity.
Any Canada, ny lalàna momba ny firenena momba an'i Oxandrolone dia mitovy amin'ny UK any 1996 raha nasiana ny lalàna, tsy misy ny fandaharam-potoana IV. Vokatr'izany, tsy misy ny torolàlana mazava momba ny fanamarihana ara-dalàna ho an'ireo olona nanana ny zava-mahadomelina, ireo izay manana azy io sy ireo izay liana amin'izany.
Na izany aza, ny lalànan'ny steroid any Canada dia manana fampandrenesana milaza fa ny olona iray ao amin'ny firenena dia tsy afaka mividy fanafody raha tsy hoe manazava ny antony itiavany mividy azy izy ireo. Miankina amin'ny antony nomena ny mpivarotra dia mety hanaiky na handà ny fangatahana fividianana. Ny fanandramana mividy ny steroid dia tokony harahina farafahakeliny 30 andro alohan'ny hanaovana iray hafa.
Ny vava ao amin'ny Ny lalàna mifehy ny zava-mahadomelina any Kanada, indrindra fa hatrany Oxandrolone, dia toa tsy misy dikany ny ahafahan'ny manampahefana azy hitsara maimaimpoana amin'ny tranga izay ahitàna mpanao bodybuilders mampiasa ny steroid amin'ny tanjona fialamboly. Saingy, amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny fandikan-dalàna momba ny raharaha Anavar voalohany dia nahatratra ny sazy tsy mihoatra ny $ 2000 ary ny fanagadrana azy hatramin'ny volana 18.
Ny fepetra mivaingana any Oxandrolone any Chine
Ny fanamboarana stéro toa ny Oxandrolone dia voafehy tsara amin'ny firenena maro ary izany no mametra ny isan'ireo mpanamboatra azy.
Saingy, ireo mpandraharaha mainty varotra any amin'ny firenena isan-karazany, anisan'izany i Etazonia dia manararaotra ny fahitana ara-dalàna mba manafatra ireo akora vita amin'ny Oxandrolone ary manamboatra sy mivarotra ilay zava-mahadomelina raha tsy misy ny fahalalana ny vondron-dalàna mifehy ny governemanta.
I Sina dia manana mpivarotra am-polony an'ny Oxandrolone. Io dia mahatonga ny vokatra ho mora kokoa ao amin'ny firenena fa tsy ny mpividy izay te-hividy azy io ho fanodinana fanampiny. Mampalahelo fa ny sasany amin'ireo fanafody vovo-dronono Oxandrolone avy any Chine dia mihetsiketsika, mitarika ny famokarana sy ny fivarotana ny contraband Oxandrolone manerana an'izao tontolo izao.
Inona no azonao andrasana amin'ny Oxandrolone?
Ny ankamaroan'ny mpampiasa Oxandrolone dia maka ny steroid mba hahazoana lanja amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny hozatra. Ity indrindra dia ny fanatsarana ny fahasalaman'ny olona mihena lanja mavesatra vokatry ny otrikaretina na fandidiana.
Mahagaga fa ny fahazoana lanja vokatry ny fampiasana Anavar dia famokarana hozatra matanjaka satria tsy hamofona ny hormonina nomen'ny zava-mahadomelina. Raha izany dia tsy hisedra fihazonana rano be loatra ny vatanao vokatry ny fampiasana ny steroid. Ny mahavariana iray amin'ny vokatr'ity zava-mahadomelina ity dia mora ho an'ny mpampiasa iray mihazona ny fatiantoka mavesatra.
Na dia mety tsy hanolotra tombony betsaka kokoa noho ny vokatra azo avy amin'ny fampiasana agn'ny besinimaro malaza toy ny Testosteron sy Anadrol ny rongony, dia mety ho an'ny olona izay mitady tombony tsotra fotsiny. Izany no antony tena tian'ny ankamaroan'ny vehivavy satria ny ankamaroany dia liana fotsiny amin'ny fitomboan'ny hozatra kely.
Na mila lehilahy Anavar ho an'ny lehilahy ianao Anavar ho an'ny vehivavy ho an'ny vanim-potoana ahazoana faobe mandritra ny vanim-potoana fety, tena tianao ny toetran'ny Oxandrolone manatanjaka ny metabika. Ho hitanao fa mahatonga anao hahazo habetsaky ny tavy amin'ny vanim-potoana tsy mitovy raha oharina amin'ny mampiasa steroid hafa matanjaka kokoa ianao.
Anavar ho an'ny lehilahy na Anavar ho an'ny vehivavy dia mety ho fanampiana manampy anao mandritra ny dingana fahatapahana. Ny zava-mahadomelina dia voajanahary mahery vaika. Raha izany, dia tena mandaitra amin'ny fitehirizana ny tenda raha tsy mihinana.
Rehefa te handatsaka ny tavy amin'ny vatana ianao, ny fihinanana kalôriao dia tokony ho ambany noho ny habetsaky ny kaloria doroanao amin'ny fikojakojana ny tenda ambony. Na izany aza, na eo aza ny fahatsapana ny fahatanterahana dia tsy ho simba ny vatanao raha tsy ampy asidra anabolika mahery vaika ny vatanao. Raha dinihina ireo fananany anabolika matanjaka, izay no hiverenan'i Anavar.
Rehefa mampiasa Anavar ianao mandritra ny dingana fanapahana, dia afaka mandoro tavy am-pahombiazana ny vatanao. Amin'ny farany, ho tsapanao ny vascularity mihatsara ary ho mafimafy kokoa ianao ary voafaritra kokoa. Izany no antony nifidianan'ny lehilahy maro Anavar amin'ny fihenan'ny lanjany.
Anavar no safidy tsara indrindra ho an'ny atleta noho ny fahaizany mampitombo hery. Na izany aza anefa, ny fiantraikany ao anatin'io dia tsy ho voambara toy ny an'ny tsiranokala hafa toa ny Halotestin na Dianabol.
Ny herin'ny atleta dia misy fiantraikany amin'ny hafainganam-pandehany sy ny heriny, ary samy manana fiantraikany mivantana amin'ny fampandehanana atleta ankapobeny izy. Arakaraka ny maha mafy ny atleta azy no tsara kokoa ny fampivoarany.
Ankoatra ny tanjaka, ny mpanao atleta dia heverina ho maivana ary tsy izany, tsy mila fananganana hozatra mahery vaika. Satria mampatanjaka ny olona iray tsy voatery hampitombo ny hozatrain'izy ireo, dia lasa fampitomboana fanatanjahantena mety i Anavar. Tsaratsara kokoa, tsy mitarika ny fihazonana rano, izay mety ho lasa sakana ho an'ny atleta iray.
Nihatsara ny fahombiazany
Na mampiasa an'Anavar handatsaka tavy ianao na hanatsarana ny atletisanao amin'ny atletisanao, dia ho hitanao fa rehefa mandray ny zava-mahadomelina ianao araka ny voatondro, dia mihatsara ny tahan'ny fanarenana anao. Ankoatr'izay, dia manatsara ny fiaretan'ny hozatrao izany.
Vokatr'izany dia ho lava kokoa ianao, rehefa leo, rehefa manao hetsika ara-batana, noho izany ny fahaizana manery mafy kokoa ary mihitatra kokoa. Manampy anao handray soa bebe kokoa amin'ny fotoam-piofanana ara-batana izany.
Efatra fiantraikan'ny Oxandrolone
Ireto misy fiatraikany mahazatra amin'ny ankamaroan'ny steroids malaza. Andao hojerena raha misy fiantraikany amin'ny oxandrolone.
Tsy toy ny steroida sasany Trenbolone fa ny fofom-bary, ka mahatonga ny gynecomastia, ny hormonina nomen'ny Oxandrolone dia tsy miteraka endrika fiantraikany amin'ny lafiny estrogen. Izany dia satria tsy miteraka fihazonana rano izay mety hampiakatra ny haavon'ny estrogen. Ny fananana rano tsy maharitra rano dia mahatonga ny mpampiasa iray ho mora tohina amin'ny tosidra.
Ny tsy fahatomombanan'i Oxandrolone miteraka fiantraikany estrogen dia voaporofo fa tsy mitondra hetsika mifandray amin'ny progestin izany.
Na dia tsy androgen loatra aza i Oxandrolone, dia miteraka hetsika androgenik kely. Noho izany antony izany dia ny olona izay mampiasa azy io dia azo inoana fa mitombo ny mony ary ireo izay mora voan'ny maleutitra modely amin'ny lahy dia mety hahita fahatsapana volo bebe kokoa aorian'ny fampiasana ny steroid.
Ny Anavar ho an'ny vehivavy dia afaka mamokatra fihenam-bidy androgen izay mety hampiroborobo ny soritr'aretina virilization toy ny fitomboan'ny volo amin'ny vatana, ny tadim-peo mampiakatra ary ny klitoris manitatra amin'ny vehivavy. Na izany aza, ny soritr'aretina dia azo sorohina amin'ny alàlan'ny fanaovana ny tsara Anavar dosage.
Raha vehivavy ianao ary mahatsapa ireo soritr'aretina virilization dia manoro hevitra anao ny hanajanona ny fanafody avy hatrany. Rehefa vita izany dia tokony hanjavona ireo soritr'aretina. Raha tsy izany, ny soritr'aretina dia mety ho lasa ampahany aminao raha tsy mankatona azy ireo ianao ary mitohy amin'ny steroid.
Na izany aza, ny ankamaroan'ny mpampiasa ny steroid dia tsy mahatsapa ny fiantraikany amin'ny lafiny androgen satria ambany be ny toetran'ny androgen.
Tsy toy ny steroid anabolika hafa izay tokony ampiasaina miaraka amn'ny 5-alpha reductase inhibitors ho an'ny farany hisorohana ny mety ho vokatry ny androgen, dia ho voaro sy malemy ihany i Anavar na dia tsy misy ny mpamporisaka aza. Izany dia satria ny angovo 5-alpha reductase dia natao hampihena ny testosterone amin'ny dihydrotestosteron, saingy satria efa Oxidolgostro ny Oxandrolone, tsy mila ny anzima.
Ny iray amin'ireo fiantraikany mahery indrindra amin'ny oxandrolone dia misy ifandraisany amin'ny kolesterola. Ny hormonina Oxandrolone dia mamehy ny kolesterola HDL hatramin'ny 50% ary manangona ny kolesterola LDL hatramin'ny 30%.
Noho ireo fiovan'ny kolesterola ireo dia manoro hevitra ny olona manana olana momba ny kolesterola mba tsy ho afa-miasa amin'ny fampiasana oxandrolone. Raha tsy izany, ireo izay mahasalama tsara ho an'ny fampiasana azy dia ampirisihina hihazona ny fomba fiaina mahasalama amin'ny fihinanana sakafo mahavelona amin'ny kolesterola misy asidra matavy avo ary manao asa betsaka amin'ny aretim-po.
Rehefa mampiasa io zava-mahadomelina io dia tsara ihany koa ny manapotika ny sotro sous sy ny siramamy tsotra. Azonao atao ny mampiditra supplement supplement antioxidant fanampiny mba hitazomana ny haavony.
Izay steroida azonao raisina, anisan'izany Anavar, manakana ny famokarana testosterone voajanahary ao amin'ny vatanao. Na izany aza, ny tahan'ny famoretana dia hafa noho ny steroid amin'ny iray hafa. Raha oharina amin'ireo steroid hafa amidy ankehitriny, Anavar dia manana iray amin'ireo fihenan-tsasatra malefaka indrindra. Manafoana ny haavon'ny serum amin'ny ankapobeny.
Na eo aza izany, na dia kely aza ny fiatraikan'ny famokarana testosterone voajanahary Anvar, ny lehilahy dia nanoroana hanao testosterone exogenous ho singa iray amin'ny singa maha-supplementing azy. Raha tsy izany, ny hormonina oxandrolone dia mety miteraka aretim-panetren-tena miaraka amin'ny testosterone, miaraka amin'ireo soritr'aretina hafa mety hitranga.
Na izany aza, misy ny lehilahy sasany dia tsy mahatsapa olana mifandraika amin'ny testosterone noho ny fampiasana Anavar na dia mihena ny 50% ny testosterone ny haavon'ny famokarana testosterone. Miankina amin'ny testosterone voajanahary lehilahy iray na izany aza. Na izany aza, ny ankamaroan'ny lehilahy dia mila fitsaboana testosterone exogenous hanamaivana ny soritr'aretina mety noho ny fampiasana ny steroid.
Soa ihany, toy ny steroid hafa anabolika hafa, ny fiantraikan'ny testosterone ratsy amin'ny Anavar dia manomboka hanjavona indray mandeha rehefa tsy misy maka izany ny olona iray. Fa ny fanarenana tanteraka dia maharitra ny fotoana hitranga ary izany no drafitra fitsaboana fitsaboana (siklus fitsaboana) (PCT) dia natokana rehefa vita ny fitsaboana. Manafaingana ny dingana fanarenana ny PCT.
Anavar dia C17-aa Anabolic steroid ary noho izany, mety hiteraka fahavoazana ny atiny, na dia tsy mivantana aza. Ny fampiasana mitohy ny steroid dia mety hiteraka fitomboan'ny hasin'ny enzyme. Ny fitomboan'ny atzin'ny atiny dia manamafy ny aty, mitombo ny loza manimba azy.
Ka noho ny fahasalaman'ny atinao dia zava-dehibe ny manalavitra ny fampiasana steroid anabolika C17-aa, anisan'izany i Anavar raha sendra misy olana aretin-doha ianao. Ary koa, aza maka alikaola be loatra rehefa manampy beidra anabavy C17-aa toa an'i Anavar mba hisorohana ny fihoaran'ny atinao.
Detoxifier ny atiny ao amin'ny drafi-pandoanao fanampiny raha mampiasa Oxandrolone dia handeha lavitra ny fahasalamana amin'ny atinao. Ary satria ny fampiasana lavitra amin'ny steroid dia mety hiteraka fahavoazana ny atiny, dia ilaina ny mametra ny fotoana fametrahana Anavar fanampiny amin'ny herinandro 8.
Na dia mifanentana amin'ny lehilahy ny Oxandrolone, ny malefaka Anavar dia malefaka amin'ny lahy ary tsy mahomby amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa azy ny ankamaroan'ny mpampiasa, indrindra fa amin'ny vanim-potoana fivoahana na fitomboana. Na izany aza, mbola mifikitra amin'izany ny fitazomana ny hozatra matevina, izay iray amin'ireo tanjona lehibe indrindra ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Mbola tsara kokoa, manatsara ny hetsika metabolika ny tsirairay.
Fihodinana Anavar ho an'ny vehivavy
Raha ny hormonina Oxandrolone dia tsy natao ho an'ny fampivoarana faobe, tsy fahita amin'ny mpampiasa vehivavy ny miaina 100% fatiantoka mihanaka rehefa mampiasa azy. Raha izany, ary noho ny antony marim-pandeferana be dia be ary io no safidinao ho an'ny vehivavy atleta ara-panatanjahantena manao asa mahomby.
Ireo mpampiasa Oxandrolone izay mihinana sakafo sy ireo fitomboana dia mahazo tombony betsaka amin'ny zava-mahadomelina satria manohana singa marobe ara-batana ao anatin'izany ny fananganana vatana, ny tarehimarika ary ny vatana bikini matevina.
Ny tsingerin-tsolika Anavar mahazatra ho an'ny vehivavy dia in10mg mankany 20mg amin'ny zava-mahadomelina isan'andro ary matetika amin'ny fipoahana enina herinandro. Na dia nandalo ny 20mg aza ny fihodinana sasany, ny fihenan-danja dia tsy ilaina ary mety hiteraka voka-dratsin'ny oxandrolone.
Raha vehivavy ianao ary te hampiasa ny steroid mandritra ny enim-bolana mahery, dia tsara ny hanomboka sy hahay miaraka amin'ny fotoam-pianarana 3 hatramin'ny 4 alohan'ny hidiranao amin'ny fampianarana 6-herinandro.
Fihodinana Anavar ho an'ny lehilahy
Ny ankamaroan'ny mpampiasa lehilahy dia mampiasa Anavar amin'ny fihenan'ny lanjany indrindra indrindra mandritra ny dingana fanaovan-jiro / fisakafoanana. Hitan'izy ireo isan'andro ny 50mg ny zava-mahadomelina isan'andro amin'ny fatra mety hanombohana Anavar. Saingy, amin'ny maha lahy anao, dia afaka mampiasa hatramin'ny 80mg isan'andro ianao ao anaty fetra ihany, dia azo antoka ho an'ny vatanao ny fanafody.
Raha raisina Vidiny Oxandrolone farafahakeliny $ 2 isaky ny kitapo 10mg, mety ho lafo be ny tsikera Anavar ho an'ny lehilahy.
Ny fatra Anavar havanana dia miovaova ho olona iray hafa; arakaraka ny maha lahy na maha vavy ary koa ny tanjony tsy miankina.
Amin'ny ankapobeny, ny vehivavy dia mila fatra ambany noho ny Oxandrolone noho ny lehilahy iray hahatratra ny vokatra / tombony mitovy. Raha ny mahazatra, ny tsingerin-jaza voajanahary Anavar ho an'ny vehivavy dia ao amin'ny habe 10mg isan'andro. Na izany aza, ny fatra isan'andro dia afaka mandeha avo lenta amin'ny 20mg ary na dia afaka mitarika valiny tadiavina aza izany, ny fatra avo lenta amin'ny fatra amin'ny steroid dia mety hahatonga ny vehivavy hamorona famantarana virilization.
Ny atleta lahy iray izay liana amin'ny fivoahana ny dosage Anavar manomboka amin'ny 80mg isan'andro dia mety tsara indrindra. Na izany aza, ny fatra iray kely azo ampiharina nefa tsy tokony ho latsaky ny 30mg, raha tsy izany dia tsy mahomby izany.
Araka ny fikarohana sy ny isan-karazany Anavar Reddit hevitra, ny fitsipi-pifehezana mahazatra Anavar ho an'ny lehilahy is 50mg isan'andro.
Ahoana ny fanaovana labiera Oxandrolone
Ny vovo-dronono: isaky ny 1 grama Oxandrolone
Ny fifantohana avo indrindra: 20 mg / ml
Ny 1 grama misy vovobon'ny Oxandrolone
Mpanapaka 1 izay mety hampidirina amin'ny ranon-dra amin'ny rano
2 ml of 190 Proof mahavelona alikaola
Aiza hividy Oxandrolone
Ny hany toerana ahafahanao mividy Anavar legit sy avo lenta dia avy amin'ny mpivarotra manana alàlana ara-dalàna. Amin'izany fanamarihana izany, AASraw no toerana tsara indrindra ahazoana ny vokatra.
AASraw dia mifampiraharaha amin'ny syntheta lehibe sy ny famokarana Oxandrolone ary noho izany dia afaka manome anao ny habetsahan'ny Anavar for sale na atsaharo ny fanjifana raha toa ka mahafeno ny fepetra ilaina. Miasa eo ambanin'ny CGMP izahay ary ny rafitra fanaraha-maso kalitao azo zahana dia manampy anay hiasa ao anatin'ny faritry ny lalàna mifandraika amin'izany mba hahazoana antoka fa manolotra vokatra avo lenta izahay.
Famaritana meta: Oxandrolone (Anavar) dia fanafody androgen sy androgen steroid (AAS), izay tena malaza noho ny tanjany sy ny angovo mampatanjaka ny angovo. Izy io dia eo amin'ny steroola anabolic malaza indrindra sy ampiasaina. Ny Oxandrolone dia azo atokana ho an'ny lahy sy ny vavy raha mifamatotra ny fatra marina.
Demling RH, DeSanti L: Oxandrolone mitombo ny fatiantoka mavesatra mandritra ny fanarenana ny fandoroana mafy dia voahazona aorian'ny fampijanonana ny anabolic steroid. Burns. 2003 Dec; 29 (8): 793-7. [PMID: 14636753]
John Cabaj, "Fomba entina manamboatra ny oxandrolone." US Patent US20030032817, navoaka ny 13 Febroary 2003
Karim, A., Ranney, RE, Zagarella, J., & Maibach, HI (1973). Ny toetran'ny oxandrolone sy ny metabolisma amin'ny olona. Fitsaboana ara-pahasalamana sy fitsaboana, 14 (5), 862-869.
Raiti, S., Trias, E., Levitsky, L., & Grossman, MS (1973). Oxandrolone sy hormonina fitomboan'ny olombelona: fampitahana ny vokadratsy mampitombo ny zaza fohy. American Journal of Diseases of Children, 126 (5), 597-600.
Rosenbloom, AL, & Frias, JL (1973). Oxandrolone ho an'ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny Syndrome Turner. American Journal of Diseases of Children, 125 (3), 385-387.
Strauss, RH, Liggett, MT, & Lanese, RR (1985). Fampiasana steroid anabolika sy vokany tsapa amin'ny atleta vehivavy efa niofana folo lanja. Jama, 253 (19), 2871-2873.
Torolàlana momba ny fividianana tanteraka ho an'ny bodybuilding SARM SR9009 Ahoana no anampian'i Flibanserin ny vehivavy toy ny hormonina firaisana